March 2018 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waa maxay sababta qiimaha kortaan UK tareenka si sare? Qiimaha raacitaanka tareenka UK aad buu u kacay. Europe waxaa loo arkaa in ay leeyihiin sodcaalladoodii tareenka ugu fiican adduunka. sodcaalladoodii oo tareen bii'adda ee Europe ku jira muuqaal qurux badan. rakaabka tareenka meel kasta helaan tuulooyinka fog fog si ay…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Waxaad leedahay xamuulka ah fursadaha marka aad go'aansato sida ay u safraan. Sida magaca movie caanka ah, waxaad tagi kartaa via diyaaradaha, tareenada, iyo baabuurta. Marka ay timaado in qaadashada safar of Italy, si kastaba ha ahaatee – waxaa jira faa'iidooyin qeexan oo lagu socdo…